नयाँ सरकार र समृद्धिको सपना | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण नयाँ सरकार र समृद्धिको सपना
नयाँ सरकार र समृद्धिको सपना
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिरहँदा उनी यसअघि त्यो पदमा आसीन हुँदाको अर्थराजनीतिक परिदृश्य स्मरण भइरहेको छ । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा तराई/मधेशमा उठेको आन्दोलन र त्यसले सृजना गरेको असहजताबीच कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा उक्लिएका ओलीले सामना गरेको अवस्था कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । नाकाबन्दीको कहरबाट आजित दैनिकीले त्यसबेला भोगेको असहजतालाई थामथुम पार्न ओलीले देखाएको समृद्धि सपना र बाँडेको आश्वासन निकै रोचक लाग्दथे । दिनभरि लाइनमा उभिँदा आधा सिलिण्डर खाना पकाउने ग्यास नपाइरहेको अवस्थामा पाइपबाट घरघरमा ग्यास आपूर्तिका कुरा र नाकाबन्दीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव खेपिरहँदा समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराइरहेका पानीजहाजको सपना पत्याउनैपर्ने तत्कालीन कारण पनि थिएन । १ सय रुपैयाँ लिटरको पेट्रोल कालो बजारमा ५ सय रुपैयाँ तिर्दा चीनतिरको नाका खुलाएर चिनियाँ तेल भित्र्याउने योजना पनि त्योभन्दा फरक लाग्दैनथ्यो । हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजनालाई हावादारी मात्र भनेनन्, हावामै उडाए । तर, सपना नदेखी समृद्धिको यात्रा शुरू हुँदैन भन्ने पनि उक्ति नै सत्य हो ।
प्रकारान्तरले ओलीका यस्ता तानाबानाहरू त्यसयता आंशिक रूपमै भए पनि सरकारी बजेट र योजनाहरूमा समेटिएका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा करीब दुईतिहाइ बहुमतको नजिक रहेर ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बनिरहँदा अब ती योजनाको सार्थक कार्यान्वयनबाटै आर्थिक विकास र दिगो समृद्धिको मार्गचित्र तय हुनेछ । सङ्घीयताको सफल अभ्याससँगै आफैंले घोषणा गरेका विकासे योजना र देखाएका समृद्धि सपनाको पूर्णता नै ओली सरकारका निम्ति मूल चुनौती पनि बन्नेछन् । कुनै चामत्कारिक राजनीतिक उथलपुथल नभए अबको ५ वर्ष वाम गठबन्धनको सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्नेमा आशङ्का छैन । यसर्थ, यो समय भनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका निम्ति आफूलाई अब्बल सावित गरेर देखाउने अवसर पनि हो । राजनीतिक परिदृश्यमा प्रकट भएको यो मौकालाई मुलुकको समृद्धि र स्वयम् वाम राजनीतिको भविष्य निर्धारणमा उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने वाम नेतृत्वको हातमा छ । यो राजनीतिक सफलतामै देशको विकास र समृद्धिको अपेक्षाको पूर्णता पनि निहित हुनेछ भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय पूरा भएकाले अब आर्थिक स्थायित्वको आलाप र अपेक्षा दुवै बरोबरी छ । नेतृत्व आर्थिक विकासमा एकोहोरिएको बताइरहेको छ भने जनता आर्थिक विकास र त्यसको न्यायोचित वितरणको व्यग्र पर्खाइमा छन् । विकासका अवसरहरूको समुचित प्रबन्ध र वितरणका लागि अघि सारिएको सङ्घीयतालाई कसरी यो अपेक्षा सम्बोधनको औजार बनाउने भन्ने मुख्य उद्देश्य मानिनुपर्दछ । तर, यसको कार्यान्वयन चुनौतीका चाङले भरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका निम्ति कयौं भौतिक र कानूनी पूर्वाधारको पूर्णता बाँकी छन् । सरकारले हालै सङ्घीयताका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि मात्र १६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको थियो । तर, अहिलेको विकास बजेटलाई हेर्दा पूरै रकम लगाइयो भने पनि यो आवश्यकताको पूर्तिका लागि मात्र अबको ५ वर्ष यसैमा जाने देखिन्छ । यो अवस्थामा सङ्घीयताको अभीष्ट पूरा गर्न स्रोत र साधनको पहिचान, व्यवस्थापन र परिचालन फलामको चिउरासरह हुनेमा कुनै आशङ्का छैन । सरकार यस्ता पूर्वाधारको पहिचान र उपयोगमा सचेत नभई हुन्न ।
सङ्घीयताको सार्थक कार्यान्वयनका निम्ति ओली सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत साधनको उपयुक्त परिचालनमा समस्या देखिएको छ । आवश्यक नियम कानून आउन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारलाई लिएर एक खालको तानातान प्रकट भइसकेको पृष्ठभूमिमा सङ्घीय सरकारको भूमिका समन्वयकारी हुन सकेन भने असन्तोषको अर्को अध्यायको सूत्रधार हुनेछ । स्रोत र सामर्थ्यका अन्तरविरोधहरू सङ्घीयताको असफलताका कारण बनेका उदाहरणहरूको कमी विश्वको अर्थराजनीतिमा छैन । अहिले विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको सुशासनको अभाव हो । खर्चको न्यून क्षमता र भइहाले पनि नीतिगत तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार अविकासको मूल कारण हो । ओली सरकारले यो चुनौतीको सामना कसरी गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । भर्खरै भएका चुनावमा धन र डनका प्रभाव पहेलीहरूको कमी देखिएन । यसले अबको अर्थराजनीतिक मार्गलाई दूषित गर्दैन भन्न सकिन्न । सरकारले यस्ता अवरोधको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्रको आधार निर्माणमै हावी यो प्रवृत्तिको तत्काल अवशान त्यति सहज भने देखिन्न ।
लक्ष्यमा राखिएको तीव्र दरको आर्थिक विकास र यसको स्थायित्वका निम्ति ठूलो परिमाणमा लगानीको खाँचो छ । सरकारी स्रोत साधन पर्याप्त छैनन् । आन्तरिक लगानी आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । बाह्य लगानी आह्वान गरिएको छ । तर, वैदेशिक लगानीको आँकडा अपेक्षाको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । लगानीको प्रबन्ध कसरी गर्ने ? लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने ? यो मुख्य कार्यभारभित्र पर्ने कुरा हो । यसका निम्ति पर्याप्त सुझबुझभन्दा पनि आग्रह र आवेगका कुरा मात्र सतहमा आएका छन् । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको निश्चितता नभई यो आउने छैन । सरकारले सरोकारका कानून निर्माण गरी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उदारवाद र समाजवादका विरोधाभासदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणका सतही तर्कले लगानीको प्रवृत्तिलाई सहजताको सङ्केत दिन सम्भव हुँदैन ।
वर्तमान सरकारका निम्ति सन्तुलित र सापेक्ष छिमेक सम्बन्धलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको विषयलाई लिएर भारतसित चिसिएको सम्बन्धमा यस पटक सुधारका आधारहरू नदेखिएका होइनन् । सरकार निर्माणअघि भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणले ‘कोर्स करेक्सन’को आभास भइसकेकै छ । अब यसलाई कसरी सन्तुलित र सार्थक बनाएर अघि बढाउने ? त्यो सरकारको कार्यनीतिमा भरपर्ने कुरा हो । सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गरिराख्दा आवश्यकताको ओजलाई केन्द्र भागमा राखिनुपर्दछ । आर्थिक शक्तिको होडमा दौडिएका दुई छिमेकबाट कसरी आफ्नो हित निश्चित गर्ने भन्ने नै वर्तमान सरकारका निम्ति वैदेशिक सम्बन्धमा दक्षता परीक्षणको कसी बन्नेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइराख्दा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको समग्र आर्थिक स्थितिको अर्धवार्षिक समीक्षा सकारात्मक छैन । यो अर्थराजनीति आगामी दिन असहज बन्दै छन् भन्ने सङ्केत हो । बहिर्गमन हुँदाहुँदै पूर्ववर्ती सरकारले देखाएको वित्तीय अराजकता र यसले उत्पादन गरेका आयामको व्यवस्थापन वर्तमान सरकारका निम्ति चुनौतीसँगै आफूलाई सक्षम सावित गर्ने अवसर पनि हो । काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले वर्तमान सरकारले भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा बढाएर गएको सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व हाम्रोजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्रका निम्ति ठूलो बोझ भएर पनि सरकारले लोकप्रियताका दृष्टिले खारेज नगर्न सक्छ । तर, यो व्ययलाई उत्पादनसित जोड्न सकियो भने सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने उपाय हुन सक्छ । यसले जनतालाई आश्रित होइन, आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नेछ । आमजनताले खाई नखाई तिरेको करको दुरुपयोगका पहेली मात्र प्रकट भइरहेको, अझ निर्मम शब्दमा भन्नुपर्दा राज्य कोषमा दलीय नेतृत्व र तिनका कार्यकर्ताको अराजकता र लूटका दृश्य मात्र बढी देखिएको अवस्थामा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ । करको दुरुपयोग होइन, जनहितमा सदुपयोगका उदाहरण पेश हुन सक्यो भने सरकार र यसका सञ्चालकप्रति जनताको विश्वास जाग्नेछ । यो अर्थराजनीतिक भविष्यका निम्ति अनिवार्य आवश्यकता पनि हो ।
वाम गठबन्धनले चुनावताका राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि सारेरै अत्यधिक बहुमत ल्याएको जगजाहेर विषय हो । जनताले यही अपेक्षाको पूर्णताका निम्ति मत प्रकट गरेरै ओलीलाई सत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेका हुन् । अब प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको कसीमा घोट्ने बेला आएको छ । यदि नेतृत्व आफ्नो प्रतिबद्धतामा चुक्यो भने त्यो मुलुकका निम्ति मात्र नभएर स्वयम् वाम राजनीतिका निम्ति पनि घातक हुनेछ । सङ्क्रमण समाधानपछिको आधा दशकको समय विकासमा फड्को मार्न सानो भए पनि अपर्याप्त समय होइन । तर, यो समयको उपयोगमा सानै उदासीनताको पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसअर्थमा ओली नेतृत्वको यो सरकार संविधानको सफल कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र समृद्धिको अभीष्टको पूर्णतामा सफल हुनु जति चुनौतीपूर्ण छ, त्यति नै अपरिहार्य पनि छ ।